समस्या नै समस्याको बिचमा पनि हामी गज्जबसँगले बाँचिरहेकाछौँ । लोडसेडिङ, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्दि अनि पानीको अभावको बिचपनि हामी आफ्नो जिविका चलाइरहेकाछौँ । हामीलाई बाँच्नको लागि अत्यावश्यक पानीको महत्व कति छ भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखिरहनु पर्दैन होला, किनकी हामी सबैलाई थाहा छ, पानीविना हाम्रो जिवन चल्न सक्दैन । हामीलाई यो पनि थाहा छ, काठमाडौँमा पानीको हाहाकार कति छ!पानी भर्नको लागि लाइनमा घन्टौँ बस्नुपर्ने अनि पानी नदेखिने बाग्मतीको बारेमा, हामीलाई काठमाडौँमा पानी पाइन्थ्यो, बाग्मतीमा पौडि खेल्थ्यौँ, बाग्मतीको माछा खान्थ्यौँ जस्ता कुराहरु भनिँदा परापूर्वकालको कथाहरु जस्तो लाग्ने गर्छ । तर काठमाडौँमा पानी देखेका, बाग्मतीमा पौडि खेल्नेहरु भन्छन्, २० वर्ष अघिसम्म पनि बाग्मती धेरै राम्रो थियो, काठमाडौँमा यति ढुंगेधाराहरु थिए कि, पानीको कुनै समस्या नै हुँदैनथियो । अहिले त खै, न बाग्मतीमा पानी देखिन्छ न ढुंगेधारा नै देखिन्छ । कहिँकतै ढुंगेधारा देखिइहाले पनि पानी भने देखिँदैन ।काकाकुलको जिवन बाँचिएपनि, कहिले पूराहुने छाँट नदेखिएको मेलम्चीको पानी सम्झिँदै, कुनै बेला त मेलम्ची पनि आउला नि …
The most awaited Nepali Movie ‘Highway’ which is set to release on 15th June 2012 (असार १, २०६९) has released its official theatrical trailer today on YouTube.The first crowd funded Nepali movie ‘Highway’, which has been creatingabuzz ever since it went into production was screened at one of the most prestigious film festival ‘Berlin Film Festival 2012’ on February. Directed by Deepak Rauniyar and produced by Dr. Sameer Mani Dixit, Dr. Lonim P Dixit. Joslyn Barnes and Danny Glover, the movie is believed to be another milestone in Nepali film industry.Highway movie trailer was first released on last September in Kathmandu. Highway – Official Theatrical TrailerSynopsis:Set among the breathtaking landscapes of Eastern Nepal, HIGHWAY, the first full-length feature of director Deepak Rauniyar, follows the journey of nine characters whose individual stories become accidentally interconnected during an ill-fated bus journey to the capital Kathmandu. The passengers — each of whom urgently n…
Thanks to BULBUL Team for bringing suchawonderful program.You can directly send your suggestion, comments & even your gajal to:bulbul[at]unn.com.np…
मेरा लागी बैशाख ९ गते एउटा नमिठो अतित बोकेर आइदिन्छ । स्मृतिमा गहिरोसँग बसेको त्यो दिन मनबाट कहिल्यै हराउने छैन । सधैँ सम्झाइरहने चिनो छ म संग । जो कहिल्यै मेटिने छैन । अनि सधैँ याद दिलाइरहने चोट छ म सँग जो कहिल्यै निको हुने छैन ।
यिनै बैशाखि दिनहरुमा पाँच वर्ष अघि सडक बेस्सरी तातेको थियो । स्थायी शान्ति, आशा र परिबर्तनको पक्षमा नेपाली जनताहरु शसक्त रुपले जुर्मुराएका थिए । गाउँ देखी शहर गहिरो निद्राबाट ब्युँझिएको थियो । नयाँ नेपाल बनाउने सपना बोकेर परिबर्तनको पक्षमा मुठ्‍ठिहरु उठेका थिए । सारा नेपालीहरुको आवाज शान्ति र गुमेका आफ्‍ना अधिकारका पक्षमा बुलन्द रुपमा गुञ्जिएको थियो । त्यही आशा, सम्भाबना र परिबर्तनको राजमार्गमा म पनि थपिएको थिएँ।
बैशाखको चर्को गर्मी निकै बढेको छ । सारा जनताहरु सडकमा ओर्इरिएका छन्‍ । एकातिर तत्कालिन बिद्रोहि शक्ति माओबादी र अर्कोतिर राजाको प्रत्यक्ष निरंकुश शासनबाट जनताहरु आजित बनेका छन्‍ । दिनदिनै हत्या, हिंसा, बढ्‍दो छ । उकुसमुकुस हुने यस्तो परिस्थीतिबाट नागरिकहरु मुक्ति खोजिरहेका छन्‍ । त्यसैले मनमा परिबर्तनको बलियो अठोट र चाहनाको हुरी चल्दैछ । भोक, तिर…
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, फ्लिकर, पिकासा लगायतका साइटहरुमा दैनिक लाखौँ फोटोहरु अपलोड हुने गर्छन् । यसका अतिरिक्त इन्टरनेटमा अन्य सयौँ फोटो सेयरिङ साइटहरु पनि छन् । भर्खरै पनि फेसबुकले फोटो सेयरिङ मोबाइल एप्स इन्स्टाग्रामलाई महंगो मुल्य तिरेर किनेकोछ । हामीले खिच्ने प्रत्येक फोटोले कुनै न कुनै कथा बोकेको हुन्छ, चाहे त्यो प्रोफेशनल क्यामराले खिचिएको होस् वा साधारण मोबाइलबाट खिचिएको होस् । हामीले ती फोटोका कथाहरु फेसबुक, ट्विटर, फ्लिकर, पिकासा, मुभी मेकर, आईफोटो आदि विभिन्न साइट र विभिन्न टुलहरु मार्फत सेयर गर्ने गरेकाछौँ । यही फोटोहरुको कथा भन्ने भन्ने मेसोमा नेपाली सफ्टवेयर ‘पिकोभिको’ पनि थपिएकोछ ।मुभी मेकर, पिकासा, आईफोटो आदि चलाइरहेका प्रयोगकर्ताहरुलाई भर्खरै बजारमा आएको नेपाली सफ्टवेयर ‘पिकोभिको’ (Picovico) बारेमा भने खासै जानकारी नहुन सक्छ ! पिकोभिको (Picovico) फोटोहरुलाई भिडियो (Photos to Videos) मा छिटो र छरितो सँग बदल्ने फ्रि “वेब वेस्ड एप्लिकेशन” (Web based Application) हो, जसबाट सजिलोसँग आफूले चाहेको थिम (theme), संगित (Music) र शब्द (Text) राखेर फोटोहरुलाई भिडियोमा बदल्न सकिन्छ ।…
You r the power in my prayers n the melody to my song...…
अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामाले आफ्नो राष्ट्रपतिको चुनाव प्रचारको लागि सोसलमिडियाको भरपुर उपयोग गरेका थिए । सोसलमिडियामा गरिएको व्यापक ‘क्याम्पिङ’का कारण ओवामालाई राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा सफलता मिलेको थियो ! ओवामा त एउटा प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन् ! हिजोआज सोसल मिडियालाई पत्रकार, कलाकार आदिले मात्र होइन राजनितिज्ञले पनि अंगाल्दै गइरहेकाछन् । भेनेजोएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेज देखि लिएर क्युवाका फिडेल क्यास्ट्रो, अनि भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह लगायतहरुले ट्विटरमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेकाछन् ।आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन भनौँ वा जनतामाझ पुग्नको लागि राजनितिज्ञहरुले हिजोआज सोसलमिडियाको भरपुर उपयोग गर्न थालेकाछन् ! वर्षदिन अघिको खबरलाई साँचो मान्ने हो भने, भेनेजोएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले आफ्नो ट्विटर व्यवस्थापनको लागि करिब २०० कर्मचारी खटाएका थिए । संसारभरी फैलिएको सोसलमिडियाको ज्वरो, नेपालमा बिस्तारै छिर्दै गएकोछ । केही नेपाली कलाकारहरु र नेपाली ब्रान्डहरुले सोसलमिडिया विशेषत फेसबुकमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका भएपनि नेपाली राजनितिज्ञहरु फेसबुक तथा ट्विटरमा भेट्न मुस्किल नै पर्छ भन्दा…
आज देखि नयाँ वर्ष २०६९ लागेकोछ ! हुन त दिन, हप्ता, महिना उनै हुन् ! बिहान, दिउँसो, बेलुका अनि रातीको आफ्नो ‘टाइमटेवल’ पनि उही नै हो ! तर पनि नयाँ वर्ष भन्ने बित्तिकै, आजको शुक्रबार अन्य शुक्रबार भन्दा पृथक र विशेष छ । यो शुक्रबार नयाँ वर्षको दिनमा परेको छ !मान्छे उही नै हुन्, सोच उनै हुन् तर पनि नयाँ वर्ष लागेपछि हामी केही राम्रो सोच्ने प्रण गर्छौँ, राम्रो गर्ने प्रण गर्छौँ ! आफ्ना आशा र विश्वासलाई अझ दरिलो पारेर, अघि बढ्ने कुरा नै हुने गर्छन्, वर्षको पहिलो दिनमा ! तर वर्षको अन्त्य सम्म आइपुग्दा, आफूले सोचेका – नसोचेका अनगिन्ती कुराहरु हुन्छन् ! अनि वितेको वर्षलाई नियाल्दा, कुनै कुरा राम्रा लाग्छन्, अनि कुनै कुरा आफैँलाई झुर लाग्छन् ।सायद नयाँ वर्ष, आफूले गरेका कामहरुलाई फर्किएर हेर्ने स्थान पनि होला, अनि सकरात्मक सोच्ने समय होला । २०६८ मेरा लागि निकै महत्वपूर्ण वर्ष रह्यो ! २०६८ मा इन्जिनियरिङ पास गरियो, पहिलोपटक रेल अनि जेट चढियो, पहिलोपटक नै बेङ्लोर गइयो, इन्टर्नसिपको लागि ! हुन त जिन्दगीमा गरिने सबै कुराहरु पहिलोपटक नै हुन्छन्, तर पनि पहिलोपटक कुनै काम गरियो भने त्यसको बेग्लै खुशी…